अन्तरवार्ता Archives - Page2of5- A complete Nepali news portal based on news & views
चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङ निकट भविष्यमै नेपालको भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल चीन सम्बन्ध, बिआरआई र यसबाट नेपालले लिनसक्ने लाभ सम्बन्धमा नेपालका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग गरिएकाे कुराकानी १. नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध विगतदेखि अहिलेसम्म कस्तो रहेको पाइन्छ ? – नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राचीनकालदेखि शुरु भएको हो । स्रङचङ गम्पो, भृकुटी […]
सीको भ्रमणले हिमाली क्षेत्रको जनताको जीवनस्तर उकास्न भूमिका खेल्ने विश्वास छः पोखरेल
१७ आश्विन २०७६, शुक्रबार १७:३० October 4, 2019 Nonstop Khabar
काठमाडौँ, १७ असोज । चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल–चीनको सम्बन्धका बारेमा दश वर्षदेखि निरन्तर रुपमा क्रियाशील भएर नेपाल–चीन हिमालयमैत्री समाज स्थापना गरी काम गर्दै आएका समाजका संरक्षक तथा पूर्वपर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलसँग कालिका खड्काले गरेको कुराकानी : १. नेपाल–चीन सम्बन्धलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? नेपाल–चीन सम्बन्धलाई दुई ढङ्गले परिभाषित गर्नुपर्छ, एउटा […]
काठमाडौँ, ११ असोज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वको दुई तिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने र त्यसलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रक्रियामा सरकार लागि परेको छ । समाजवादउन्मुख नेपालको संविधानको भावनाअनुरुप सरकारले केही […]
काठमाडौँ, ३१ भदौ । “गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्ती बाट उठ।।।” जनतालाई उठाउन गाइएको यो गीत नसुन्ने नेपाली को होला ? यसलगायत धेरै प्रगतिशील गीतले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याएका छन् । यस गीतले पञ्चायतकालदेखि संसदीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्न धेरै ऊर्जा दिएको थियो । यस्ता कालजयी गीतका गीतकार श्याम तमोटको नाम भने गीत […]
२९ भाद्र २०७६, आईतवार ०७:२७ September 16, 2019 Nonstop Khabar
शैक्षिक सुधारका लागि विद्यालयमा भएका फरक अभ्यासहरु के–के छन् ? विद्यार्थीले चाहेअनुसारको सिकाइ वातावरण तयार गरेका छौं । सिकाइलाई प्रविधिसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौं । विद्यार्थीहरुलाई प्रोजेक्ट वर्क र कक्षाकोठा बाहिरको सिकाइमा जोड्दै आएका छौं । १ कक्षा देखि १० सम्मकै विद्यार्थीहरुलाई अनुसन्धान र प्रोजेक्टवर्क खोज सिकाइमा सहभागी गराउँदै आएका छौं । पढेर मात्रै होइन […]
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रमले नतिजा दिन थालेको बताएका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को समाजवादी नारामा जनताका विविध कार्यक्रम अगाडि बढाएको बताउँदै उनले तराई, पहाड र हिमालका जनतामा खुशीको सञ्चार प्रवाह हुन थालेको उल्लेख गरे। राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको र जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि […]
राजेन्द्र अधिकारी प्रधानाध्यापक टंगाल मावि, टंगाल,काठमाडौं समग्र विद्यालयको अवस्थाबारे बताइदिनोस् न ? वि.सं. २०२० सालमा स्थापना भएको यो विद्यालय क्रमिक रुपमा २०२७/०२८ सालमा निम्न माध्यमिक हुँदै २०४० मा माध्यमिक तह भएको हो । २०६५ सालदेखि कक्षा ११ र १२ अध्ययन अध्यापन गराउन शुरु गरेको हो । यस टंगाल माविले स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा धेरै आरोह […]
काठमाडाैं । तक्षशिला मानव सभ्यताकै सवैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो । यो इशापूर्व ७०० मा नालन्दा विश्वविद्यालयभन्दा झन्डै १२ सय वर्ष पहिले स्थापना भएको मानिन्छ । तक्षशिला विश्वविद्यालयमा तत्कालीन अवस्थामा नै १०,५०० विद्यार्थी अध्ययन गर्दथे भने यो विश्वविद्यालयमा आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तविद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शनशास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्पविद्या, तन्त्रशास्त्र, संगीत, नृत्य र चित्रकलालगायत ६४ […]
१७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १४:०२ July 23, 2019 Nonstop Khabar
तपाईँले डाक्टरी किन पढ्नु भएको ? यो धेरै पुरानो र पहिलेको कुरासँग जोडिएको छ । बाल्यकालसँग पनि जोडीएको छ । १० वर्षे द्वन्द्वकालमा देखेको चित्र र म आफैँले भोगेको पीडा पनि छ । त्यो बेलामा रोल्पामा हजारौँ कमरेडहरूले आफ्नै आँखा अगाडि दिएको बलिदानी र क्रान्तिले त्यतिखेर भोग्नु परेको क्षति । यिनै विषयले मलाई कता कता […]